भेट्न रक्सी क्षेत्रहरु मा युरोप लागि एक सपना छ हरेक रक्सी पारखी. Stunningly उत्कृष्ट दाखबारी, न्यानो र घमाइलो मौसम, enchanting hillsides, र राम्रो खाना यी शीर्ष रक्सी क्षेत्रहरु परिभाषित. तपाईं हुनुहुन्छ भने एक रक्सी प्रेमी र हेर्न चाहन्छन्, सबै भन्दा राम्रो मा वाइनरी युरोप र त्यहाँ प्राप्त गर्न कसरी, सेव एक ट्रेन तपाईं त्यहाँ प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ!
युरोप रक्सी प्रेमीहरूको प्रस्ताव छ के थाहा पढ्न. हामी तपाईंलाई छन् पहिले नै यो लेख खत्म अघि आफ्नो मनमा खचाखच भरिएको थियो शर्त!
Rhone उपत्यका रक्सी क्षेत्र छ, यति गर्न प्रस्ताव देखि एक सांस्कृतिक दृश्य को बिन्दु संग लियोन भइरहेको छ को एक यूनेस्को विश्व सम्पदाको साइटहरु. यसको सरल संग, प्रामाणिक gastronomy होट्ल, को Rhone Crozes-कुटिया को प्रसिद्ध मदिरा संग एक रक्सी प्रेमी गरेको स्वर्ग छ, विश्वभरिबाट कोटे-Rotie र CHATEAUNEUF-डु-पेप चित्रकला रक्सी पर्यटकहरु.
यो टस्क्यानी wineries प्रस्ताव सिद्ध रक्सी देश अनुभव. न केवल टस्कनीले केहि समावेश गर्दछ इटाली सब भन्दा प्रसिद्ध अपीलहरू, नयाँ वैल d'Orcia डाक्टर जस्तै, Vino Nobile di Montepulciano, यो क्षेत्र संग bursting छ गर्व, देशमा प्रेम, र विशाल आनन्द साझेदारी को यो अरूसित.
परिवार विशेष मा Riesling उत्पादन आफ्नो 4.2 अम्लता र संरचना बीच सिद्ध ब्यालेन्स द्वारा विशेषता छन् जो भूमि को हेक्टरमा. को critically-प्रशंसित मदिरा दुनिया भर वितरण भइरहेका छन्. तपाईं-साइट रक्सी स्वाद गर्न चाहनुहुन्छ भने, पहिल्यै एक नियुक्ति बुक गर्न निश्चित हुन.
आफ्नो आँखा यसको ठाडो terraces मा सेट पहिलो पटक, यो सबै को impracticality तपाईंलाई प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ. (विशेष गरी रक्सी केही बोतल पोस्ट). द्वारा मान्यता एक विश्व विरासत साइट रूपमा यूनेस्को, पोखरी जेनेभा को यो सूर्य-दिनुभयो पक्ष फूल भरिएको balconies एक कहानी सेटिङ evokes, मात्र स्थानीय Chasselas एक गिलास थप सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने नीलो पानी कञ्चनपानी. त्यस्तै, यसको पोखरी-hugging जायदाद मा soar चरम केवल एक पहाड बाख्रा र टोली बाली गर्नुपर्छ भनेर slants.
लजेन को शहर पूर्ण Lavaux को एक अन्त मा स्थित छ. यो बनाउँछ लागि एक राम्रो सहूलियत बिन्दु गर्न अन्वेषण क्षेत्र. स्विट्जरल्याण्ड भित्र, यसलाई दाखबारी आउँदा लजेन वास्तवमा बहुमत मालिक छ. (यो आश्रम एक रक्सी बढ्दै क्षेत्र कुनै भन्दा सानो मालिक 62 फुटबल क्षेत्रहरू, 400 सम्म उत्पादन’000 बोतल वर्षेनी।)
आफ्नो बैग फिर्ता र आफ्नो ग्लास चार्ज. It&#8217;s time to catchaरेल वा दुई अवलोकन गर्न सबै भन्दा राम्रो Wineries युरोप मा. एक ट्रेन सेव कुनै लुकेका शुल्क छिटो र परेशानी मुक्त टिकट प्रदान गर्नेछ. तिमी के पर्खिरहेका छन्? आफ्नो रक्सी प्राप्त गर्न समय, मा!